Apetrak’i Shina ny “Komisariàn’ny polisin’ny fiarovana an’aterineto” any anaty orinasan-tranonkala mba… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2015 8:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, 한국어, Español, English
Varavarambe fidirana ao amin'ny tobin'ny polisy iray ao Shina. Sary nalain'ilay mpisera Flickr: Alexandra Moss (CC: AT-SA-NC)
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Ryan Kilpatrick, nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 5 Aogositra ary navoaka indray ato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanomboka tamin'ny taona 2006, nanana manamboninahitra”polisin'aterineto” nisahana ny fampiharana ny lalàna eo amin'ny votoaty antserasera sy ny fihetsiky ny habatranonkala lehibe i Shina. Ireo manampahefana misahana ny fampiharana ny lalàna ireo dia manao ny asany mandehandeha any amin'ireo foiben'ny orinasan'aterineto any, izay andraisan'ireo fepetra raha sendra mahita “heloka bevava” antserasera mitranga ao amin'ny orinasa. Tsy fantatra mazava izay fitaovana ara-teknika ampiasain'izy ireo amin'izany, saingy tamin'ity herinandro ity, nasiana fanatsarana ny rafitra.
Mikasa hametraka “komisariàm-piarovana antserasera” any anatin'ireo orinasan-tranonkala sy orinasan'aterineto lehibe i Shina mba hanara-maso akaiky izay votoaty tsy amin'ny toerany, hoy ny navoakan'ny haino aman-jerim-panjakana tamin'ny Talata raha hohamafisina ny fifehezana ny aterineto eo amin'ny firenena.
Nitatitra ny Isanandrom-Bahoaka fa ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka (MPS) no hisahana ireo komisarià ary apetraka any amin'ny biraon'ireo “habatranonkala goavana” manerana ny firenena izany.
Nilaza ny minisitra lefitry ny Fiarovam-pirenena, Chen Zimin, nandritra ny valandresaka momba ny fiarovana an'aterineto tao Beijing fa hiandraikitra ny “fanarahamaso akaiky ny asan'ireo habaka sy ny fampiharana ny lalàna mifehy ny fihetsika antserasera” ireo birao ireo. Nilaza koa izy fa “tokony hiasa mafy izy ireo hanapongatra sy hanakana ireo fihetsika tsy ara-dalàna isan-karazany antserasera”.
Mety hanome fahefana bebe kokoa ireo manampahefana amin'ny fanenjehana ireo heloka bevava sy fihetsika tsy ara-dalàna, ireo fihetsiketsehana sy ireo hetsika ara-politika, ary ny fanarahamaso faobe ilay antsoina hoe “votoaty saro-pady”, amin'ny fomba mahomby kokoa ny fametrahana “komisariàn'ny polisin'ny fiarovana antserasera” vaovao.
Manamafy ny fanarahamaso
Hatramin'izao ny fitantanana ny resaka antserasera dia ireo mpamatsy votoaty amin'ny aterineto no misahana izany.
Raisina ho tompon'andraikitra amin'ireo votoaty rehetra miseho ao amin'ny habakany ireo orinasa, ary antenaina hisoroka ny fipoiran'izay votoaty ara-politika na ara-pitsarana mety hanohintohina – na amin'ny alalan'ny fomba mandeha ho azy izany na amin'ny alalan'ny fikirakiran'ny tanana mivantana mifehy ny habak'izy ireo. Mety hiteraka sazy ho an'ny orinasa tompon'andraikitra ny famelana zavatra heverina ho tsy mendrika ho hita amin'ny aterineto.
Nandray fepetra henjana dia henjana amin'ny fanaraha-maso ny aterineto i Shina nanomboka tamin'ny fitondran'ny Filoha Xi Jinping tamin'ny faramparan'ny taona 2012;
Teraka nandritra ny fitondran'i Xi tamin'ny 2014 ho fandrafetana taridàlana amin'ny politikan'ny fiarovana antseraseran'i Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina ny Foiben'ny Vondrona Mpitari-dalana amin'ny Fiarovana Antserasera sy ny Informatika, izay nodimbiasan'ny Andrim-Pitantanana Ny Farovana Antserasera ao Shina.
Amin'ny fampandrosoana ny hevitry ny “fiandrianana an'aterineto” ho fanamarinana sy fampitomboana ny fanarahamaso ny hetsika antserasera dia natolotry ny fitondram-panjakana ny lalànan'ny fiarovana antserasera vaovao tamin'ny volana Jolay izay ahafahan'ireo manampahefana manapaka ny fidirana amin'ny aterineto mandritra ny “fotoanan'ny hotakotaka”.
Nampiharina teo aloha tao Xinjiang sy Tibet nandritra ny vanim-potoana nisian'ny korontana tany ny fepetra tahaka izany.